Nchịkwa mmadụ - ITS Tech School
Kedu ihe bụ ụmụ mmadụ?
Kedu ihe bụ HRM?
Ọrụ nke HRM
Ọganihu nke Atụmatụ Ọrụ
Nkwụghachi ụgwọ na Nrite Uru
Ịmụ ihe na Mmepe
Ijikwa Iwu Na-emetụta Ọrụ
Ịmara na ihe ndị ọzọ
Nweta Ọzụzụ Ụmụaka
Kọwaa akụkụ nke HRM na otu.
Characterize ma nyochaa akụkụ nke isi ọrụ HRM.
Mkpokọta nke ọ bụla, ma ọ bụ obere, na-eji ọtụtụ ego eme ka azụmahịa na-arụ ọrụ. Capital na-etinye ego, akụnụba, ma ọ bụ ngwaahịa ndị e ji emepụta ego maka azụmahịa. Dịka ọmụmaatụ, ebe eji ere ahịa na-eji akwụkwọ ndekọ na akụrụngwa mee ihe, ebe ụlọ ọrụ ndụmọdụ nwere ike ịnwe mmemme ma ọ bụ akụkụ dị iche iche. N'agbanyeghị azụmahịa, òtù nile na-eme ka ha bụrụ ihe dịka otu a: ha kwesịrị inwe ndị mmadụ iji rụọ ọrụ ego ha maka ha. Nke a ga-abụ ihe niile anyị nwere ike ịchọta: afọ nke ego na-eji mmekọrịta emepụta ikike 'na ikike.
Nchịkọta mmadụ na-elekọta (HRM) bụ ụzọ ha si eji ndị mmadụ eme ihe, na-akwadebe ha, na-emezi ha, na-emepụta atumatu ha na-akọwa ha, na ịmepụta usoro iji jide ha. Dị ka ubi, HRM enwewo ọtụtụ ọganihu n'ime afọ iri abụọ na-adịbeghị anya, na-enye ya akụkụ dị oke egwu karị na òtù dị ugbu a. Tupu oge a, HRM na-egosi njikwa ego, na-ezigara ndị nnọchianya onyinye, nzukọ nhazi ọ bụla na-aga, na-achọpụta na e mepụtara ihe oyiyi n'ụzọ ziri ezi-na njedebe nke ụbọchị, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke akụkụ nchịkwa nke na-emegide akụkụ dị oké mkpa dị mkpa iji mezuo òtù. Jack Welch, bụ onye nlekọta mbụ nke General Electric na onye nlekọta na-ahụ maka ọrụ, mejupụtara akụkụ ọhụrụ nke HRM: "Zere mgbakọ na ihe ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ na ndenye ntọala. ... Cheta na ndị ọrụ nchịkwa dị oke egwu na ọnọdụ dị ukwuu, a na-ahụ maka ndị ọrụ ebere na ọnọdụ siri ike" (Frasch , na. al., 2010).
Ọ dị mkpa ịkpọtụrụ uche na ebe a, na mbido isi okwu nke ọdịnaya a, onye nduzi ọ bụla nwere akụkụ ụfọdụ na-akọwa njikwa akụ na ụba mmadụ. Maka na anyi enweghi aha nke onye nchịkwa gọọmentị apụtaghị na anyị agaghị eme ihe niile maọbụ ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọzọ bụ òkè nke ọrụ ọrụ HRM. Dị ka ọmụmaatụ, ọtụtụ ndị nchịkwa na-achịkwa nkwụnye ụgwọ, mmụọ nsọ, na nlekọta nke ndị ọrụ - na-eme ka echiche ndị a bụrụ akụkụ nke ọrụ HRM yana usoro nlekọta. Ya mere, akwụkwọ a yiri otu ihe dị mkpa nye onye ọ bụla chọrọ ịbụ onye na-elekọta ndị ọrụ na onye ọ bụla ga-azụ ahịa.
Cheta na ọtụtụ ọrụ nke HRM na-arụ ọrụ ndị isi ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-arụ, nke bụ ihe mere data a ji dị mkpa, n'agbanyeghị ọrụ a na-eme. Ọtụtụ ndị ọkachamara na-akwado ọnụ ọgụgụ isi asaa nke HRM na-arụ na òtù. A na-egosipụta ha na ngalaba ndị a.
Ị na-achọ ka ndị mmadụ n'otu n'otu rụọ ọrụ na ọrụ zuru oke na mkpakọrịta ahụ. N'ezie, ọbụlagodi ngwaọrụ ndị kachasị ọhụrụ, a ka chọrọ ụmụ mmadụ ugbu a. Tinyere usoro ndị a, otu n'ime ọrụ ndị dị mkpa na HRM bụ nchịkọta ọrụ. Ndị ọrụ na-agụnye usoro nhazi niile site n'inye ọrụ na ịhazi nkwekọrịta ịkwụ ụgwọ. N'ime ikike mkpara, enwere ọganihu anọ dị mkpa:
Mmelite nke atụmatụ mkpara. Ndokwa a na-enyere ụmụ mmadụ aka ịhụ ọnụ ọgụgụ nke ndị ha kwesịrị iji na-enyocha ego.
Ọganihu nke atumatu iji mesie ọtụtụ omenala na-arụ ọrụ. Okpukpe di iche iche na-arusi aka na-akawanye njọ, ebe anyi nwere otutu mmadu ndi mmadu sitere na otutu ihe ndi ozo.
Nhọrọ. Nke a na-agụnye ịchọta ndị mmadụ iji mejupụta ọnọdụ ndị ahụ.
Mkpebi. N'oge a, a ga-ezute ma họrọ ndị mmadụ n'otu n'otu, a ga-ahazikwa nkwekọrịta mmezi kwesịrị ekwesị. A na-esiwanye n'usoro a site n'ịkwadebe, ndozi, na n'ike mmụọ nsọ.
Mkpakọrịta ọ bụla nwere atumatu iji kwenye na ezi uche na mmekọrịta dị n'ime mkpakọrịta ahụ. Otu n'ime ọrụ nke HRM bụ ịmepụta verbiage gụnyere iwu ndị a. Na ọganihu nke atumatu, HRM, njikwa, na ndị isi na-ejikọta usoro. Dị ka ọmụmaatụ, ọkachamara HRM ga-achọpụta ihe ọ chọrọ maka atụmatụ ma ọ bụ ọdịiche dị na nkwekọrịta, chọpụta mmetụta maka ịbịaru nso, dezie usoro ahụ, mgbe nke ahụ gasịkwara ịbịakwute ndị ọrụ. O di nkpa iburu n'uche ebe ndi mmadu no na ndi mmadu abughi na ha enweghi ike isi oru. Ihe niile ha na-eme dị mkpa iji tinye akụkụ ọ bụla ọzọ na mkpakọrịta. Usoro ole na ole nke atumatu ọrụ nwere ike ịbụ na - eso:
Kụzie usoro ụzọ
Oge njem njem
Ntughari ojiji weebụ
Ndị ọkachamara HRM aghaghị ikwenye na ụgwọ ọrụ bụ ihe ezi uche dị na ya, na-ezute ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, ọ dịkwa oke elu iji dọọ mmadụ n'ọrụ iji rụọ ọrụ maka mkpakọrịta ahụ. Inye ego na-etinye ihe ọ bụla onye ọrụ na-enweta maka ọrụ ya. Ọzọkwa, ndị ọkachamara nke HRM aghaghị ijide n'aka na ịkwụ ụgwọ ahụ bụ ihe yiri nke ahụ na ihe ndị ọzọ na-arụ ọrụ yiri nke a na-akwụ ụgwọ. Nke a na-agụnye ịmepụta usoro nkwụnye ego nke na-atụgharị uche na ọtụtụ afọ site na mkpakọrịta, afọ nke ahụmahụ, ntụziaka, na ntụgharị ihu. Ụgwọ nke ụgwọ ọrụ onye ọrụ na-agụnye:
401 (k) (ezumike nká)
Atụmatụ ịzụta zụrụ ahịa
Ịkwụ ụgwọ ụgwọ akwụkwọ
Ebe ọ bụ na nke a abụghị usoro zuru ezu, a na-enyocha ụgwọ iji nyere aka na Isi 6 "Ụgwọ na Uru".
Nlekọta na-agụnye ịdebe na ịmegharị ndị ọrụ iji nọgide na mkpakọrịta. Inye ego bụ nchebara echiche maka nhazi nke ndị nnọchiteanya, ma enwerekwa ihe dị iche iche. 90% nke ndị ọrụ na-ahapụ otu nzukọ maka ihe ndị na-esonụ:
Ihe gbasara ọrụ ha na-eme
Nsogbu ha na onyeisi ha
Ogbenye ekwesighi na omenala hierarch
Ọnọdụ na-adịghị mma ọrụ
N'agbanyeghị nke a, 90 pasent nke ndị ọchịchị na-eche na ndị nnọchiteanya na-ahapụ n'ihi ụgwọ (Rivenbark, 2010). N'ikpeazụ, ndị isi na-agbakarị gbanwee ego ha ji akwụ ụgwọ iji chebe ndị mmadụ ịhapụ, mgbe ụgwọ ọrụ abụghị ihe kpatara ha ji ahapụ ya. Akụkụ 7 "Nyocha na Ntugharị" na Isi nke 11 "Nyochaa Ọrụ" na-enyocha usoro ole na ole iji jide ndị nnọchiteanya kachasị mma na ihe anọ ndị a.
Mgbe anyị tinyeworo ume iji nweta ndị nnọchianya ọhụrụ, ọ dị anyị mkpa iji hụ na ha dị njikere ịrụ ọrụ ahụ nakwa ịmalite ịzụlite na ịmalite ọganihu ọhụrụ na ọrụ ha. Ihe ndị a na arụmọrụ dị elu maka mkpakọrịta ahụ. Na-akwadebe bụ ihe mmeghe nke ọrụ ndị ọrụ. Ndị nnọchianya ndị chere na ha na-ewuli ha ngwa ngwa nwere ọchịchọ nke inwe ọṅụ karị n'ọrụ ha, nke na-eweta ọhụụ ndị ọrụ na-agbasawanye. Usoro nke ịkwadebe oru nwere ike itinye ihe ndị a:
Ngwá ọrụ ọrụ nke na-akwadebe, dịka ọmụmaatụ, otu esi agba ọsọ otu usoro PC
Na-akwadebe na ozi
Nhazi na ihe ziri ezi na-akwadebe, dịka ọmụmaatụ, omume na-ezighị ezi na-akwadebe na omume na-akwadebe
Ndị mmadụ nwere ike ịma banyere iwu ọ bụla nke na-emetụta ọrụ. Onye ọkachamara HRM nwere ike ịrụ ọrụ ụfọdụ n'ime iwu ndị a:
Nlekọta ọrụ ọgwụ
Na-akwụ ụgwọ ndị dị mkpa, dịka ọmụmaatụ, ụgwọ kachasị ụgwọ nke iwu kwadoro
Iwu nchekwa ọrụ
Ọnọdụ ziri ezi nke HRM na-agbanwe agbanwe mgbe niile, ya mere, HRM kwesịrị ịma nke ọma banyere mgbanwe ndị na-eme, mgbe nke ahụ gasịkwara ọganihu ndị a gaa na njikọ ọrụ niile. Dịka ikwe ka ịmepụta akụkụ nke gbasara iwu HRM, anyị ga-aza iwu ndị a n'akụkụ ọ bụla dị mkpa.
Ndị ọzọ karịa akụkụ ndị a, ikike dị ukwuu na mmekorita na nlekọta ọrụ dị egwu bụ ihe dị oké egwu maka nchịkwa ego ndị mmadụ dị irè nakwa na nchịkọta izugbe.
N'agbanyeghị na ilekọta ihe ndị dị n'ime ya, onye nchịkwa na-ahụ maka ndị ọrụ Nchịkwa chọrọ ịtụle ike ndị ọzọ na-egwu egwu nke nwere ike imetụta mkpakọrịta ahụ. Ike ndị dị n'èzí, ma ọ bụ nsụgharị ndị dị n'èzí, bụ ihe ndị ahụ nzukọ ahụ anaghị achịkwa ozugbo; n'ọnọdụ ọ bụla, ha nwere ike ịbụ ihe ndị nwere ike imetụta ihe onwunwe ụmụ mmadụ n'ụzọ siri ike ma ọ bụ nwee nsogbu. Mgbanwe ndị dị n'èzí nwere ike itinye ihe ndị a:
Ijikọ ụwa ọnụ na nkwarụ
Mgbanwe na iwu azụmahịa
Ọrụ ọgwụ na-akwụ ụgwọ
Onye nnọchiteanya chọrọ
Ọkara dị iche iche nke ndị ọrụ
Ịgbanwe ego nke ndị ọrụ ego
Onye oru nlekota ndi mmadu ndi ozo di n'uwa
Ntucha na azụ azụ
Innovation tinye, dịka ọmụmaatụ, ihe nkwụnye data HR
Ịmụbawanye iji ọrụ nke nkwurịta okwu na-ezighi ezi na-agbasa iji kesaa data nye ndị ọrụ
Ụlọ Ọzụzụ Na-akwụ ụgwọ na Gurgaon